I-Nolimbook + | Zonke iReaders
Carrefour ithathe isigqibo sokungena kwintengiso yokufunda ngokwedijithali kwaye ngenxa yoku isungule ii-eReaders ezimbini, i UNolimbook kunye Nnolimbook +, ukongeza kwiqonga lokuthenga iincwadi kwifomathi yedijithali kwaye uzikhuphele simahla. Okokuqala siza kuqala ngokujonga eyona eReader inamandla, enexabiso nge-99.90 ye-euro kwaye ejolise ekubeni yimbangi ye-Kindle Paperwhite yeAmazon.
Ngesikrini esine-intshi ezi-6, ukukhanya okudityanisiweyo kunye noyilo olunonopheleyo, uCarrefour ukwazile ukwenza i-eReader enomdla ngokwenene, esiqikelela ikamva elihle, nangona ungazi kwimarike apho ukhuphiswano luyoyikeka, kunye nokumkani oshiya Isabelo sentengiso esincinci kakhulu kwezinye izixhobo.
Ngoku lixesha lokuba ungene nzulu ungene kwiNolimbook +, ke lungela ukufunda okungcono malunga ne-eReader entsha yeCarrefour.
3 Kuya kufuneka uyazi
INolimbook + yenziwa kwi umbala omhlophe weplastikhi, apho ukuchukumisa okuluhlaza okwesibhakabhaka kutsala umdla, okunika ukugqiba okuhle.
Ngaphambili sinokufumana iqhosha eliphambili ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ukongeza kumaqhosha amabini aya kusivumela ukuba sityhile iphepha. Ezantsi kwe-eRreader sinokufumana iqhosha lamandla, nakwiblue, islot yamakhadi e-miro SDHC kunye nemveliso encinci ye-USB.
Ukusikwa kwikona esezantsi ekhohlo kuyabetha, eya kusivumela ukuba sithathe isixhobo ngesandla esinye kwaye ngaphandle kokwenza ukuba singakhululeki. Ayisiyombono yotshintsho kuba izixhobo ezininzi zizisa iikona zazo ezijikeleziweyo ukusivumela ukuba sibambe iReader ngentuthuzelo enkulu, kodwa kuyamangalisa ukutsho okuncinci.
Ngokubhekisele kwiscreen, zii-intshi ezi-6, ngenkcazo enkulu kwaye ngaphezulu kwako konke umahluko ophathekayo xa kuthelekiswa nezinye izixhobo zolu hlobo. Kwezinye ii-eReaders sinokubona iscreen esitshone kancinci kwisakhelo sesixhobo, ngelixa sikwiNolimbook + sinokuyibona kwinqanaba elifanayo nezakhelo. Le nkcukacha incinci intle kakhulu kwaye yenza ukuba ukujika kwephepha kube lula ngakumbi.
Ngaphakathi kwale eReader sinokufumana ifayile ye- ICortex A8 Allwinner A13 microprocessor, ebaleka ngesantya se-1 HGz Kwaye kunye ne-256 MB ye-DDR3 RAM vumela isixhobo ukuba sisebenze ngesantya esiphezulu kwaye sisinike ukulayisha okukhawulezayo kwee-eBooks kunye nokujika kwephepha.
Ukugcinwa kwangaphakathi kwesixhobo yi-4 GB, eya kuthi ibe ngaphezulu ngokwaneleyo ukuba ikwazi ukugcina inani elikhulu lee-eBooks, nangona ukuba ibingonelanga sinokuyandisa sisebenzisa amakhadi e-MicroSDCH ukuya kuthi ga kuma-32 GB.
Ibhetri yayo, nangona singazi ukuba zingaphi ii-mAh, sikwazile ukuqinisekisa ukuba ngokusetyenziswa okuphakathi kwaye ngaphandle kokusebenzisa gwenxa ukukhanya kwe-eReader, singayisebenzisa ngokugqibeleleyo kwiiveki ezili-9, okanye yintoni enye, into engaphezu kweenyanga ezimbini. Njengesiqhelo ezi datha zibonisa kwaye ngokuqinisekileyo umsebenzisi ngamnye unokucinezela ngaphezulu okanye ngaphantsi kwebhetri yesi sixhobo.
Ewe kunjalo, le Nolimbook + ayisweli unxibelelwano oluncinci lwe-USB esele sithethile ngalo ngaphambili kunye nokunxibelelana kweWiFi okuya kuthi kusivumele ukuba sixhumeke kuthungelwano lothungelwano kwaye umzekelo sikwazi ukusebenzisa iqonga leNolim ngokuthe ngqo khuphela iincwadi kwifomathi yedijithali esizithenga ngqo.
Kuya kufuneka uyazi
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwi-eReaders kukwazi ngokweenkcukacha ukuba zeziphi iifomathi ezixhaswayo. Kwimeko yale Nolimbook + sinokuqinisekisa ukuba iyazixhasa ezi fomathi zilandelayo; ePUB, PDF, Adobe DRM, HTML, TXT, FB2 kunye nezi fomati zemifanekiso zilandelayo; JPEG, PNG, GIF, BMP, ICO, TIF, PSD.
Kunika umdla ukwazi ukuba iCarrefour isungule izixhobo ezahlukeneyo zale Nolinmbook + kwintengiso, phakathi kwezinye iimeko ezimibala eyahlukeneyo, esinokuthi siyikhusele i-eReader yethu kwaye siyinike ubucwebe obuhle. Ixabiso layo, ewe, kwaye xa kuthelekiswa ne-eReader liphezulu kakhulu kuba kuya kufuneka sihlawule isixa esingathelekisekiyo se-19,90 euro.
Njengoko bekulindelwe le Nolimbook +, kunye nezixhobo ezisemthethweni, inokuthengwa kuphela nakweyiphi na indawo yokuthenga iCarrefour, apho uya kuba nendawo yakho, apho sinokufumana khona iingcebiso zobungcali. Singayithenga le eReader kwiwebhusayithi esemthethweni yaseCarrefour, eya kuyithumela ekhayeni lethu kwiiyure ezimbalwa.
Ixabiso layo li-99.90 euroNangona ungakulibali ukuba ungathenga iNolimbook, isixhobo esisezantsi kunoko, ngexabiso lama-euro angama-69.90.
Uyilo olunomtsalane olumhlophe noluhlaza okwesibhakabhaka
Indlela elula, esebenziseka lula
Yenziwe kwaye yaphuhliswa yinkampani ngaphandle kwamava amaninzi kule ndawo
Ivenkile yeencwadi yedijithali yeCarrefour ayiboneleli ngeencwadi ezininzi zedijithali ezahlukeneyo
Isixhobo sinika imvakalelo, ingeyiyo yokwenyani, yokuncipha
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » Nolimbook +
Molo ndingathanda ukwazi ukuba i-nolim enokukhanya ine-browser ukuze ikwazi ukukhangela i-intanethi nceda ndingathanda impendulo enkosi
Yurena elungileyo kakhulu.
Enkosi kakhulu kukuba andithandabuzi ukuba ndiyithenge okanye i-kobo aura ukuba bendisazi ukuba ndinesikhangeli esinokucebisa i-nolim ngokukhanya okwakhelweyo okanye i-kobo aura
Is that as they compare the nolim with light with the kindle Paperwrite kuba andazi nokuba ndiyayithenga na le nolim okanye i kobo aura ingandixelela ukuba ngubani othenge omnye kwaba babini amava abo kukuba ndifundile ukuba i-nolim ayisebenzi Kulungile nakwezinye iisayithi ndifunde ukuba iBhetri ihlala iiveki ezimbini kwaye kwezinye iindawo ihlala iiveki ezilithoba, andilindi mpendulo ukuze ndikwazi ukonwabela into endiyithandayo kangangokuba ifundwe kuba xa ndibabuza Ivenkile abayi kuthetha nantoni na engalunganga kuba kulunge ukuba ndiyithenge kwaye nakumajelo eendaba ngakumbi ngokufanayo ndiyathemba impendulo enkosi
Enye into endiyibonileyo kukuba bayithelekisa njani i-nolim kunye nokukhanya kunye ne-Kindle Paperwrite, kuba andazi ukuba ndiyathenga i-nolim okanye i-kobo aura, bangandixelela ukuba ngubani othenge enye yazo, amava abo ukuba ndiyifundile ukuba i-nolim ayisebenzi Kulungile kwaye kwezinye iisayithi ndifundile ukuba ibhetri ihlala iiveki ezimbini nakwezinye iisayithi ezihlala iiveki ezilithoba andilindi mpendulo ukuze ndikwazi ukonwabela into endiyithandayo kangangokuba yeyokufunda kuba xa ndikubuza evenkileni abayi kundixelela into engeyiyo kuba kulula ukuba bayithenge kwaye nakumajelo eendaba ngakumbi ngokufanayo ndilinde impendulo enkosi
E-United States, abafundi bakhetha iphepha xa befunda
Iincwadi kunye neemovie. Fumanisa ulungelelwaniso loncwadi oluli-100